डिएसपी सापकोटाको गोदावरीमा पहिलो एक्सनः एकै दिन २२ भाआईपी जुवाडे पक्राउ « Janaboli
डिएसपी सापकोटाको गोदावरीमा पहिलो एक्सनः एकै दिन २२ भाआईपी जुवाडे पक्राउ
ललितपुर । राजधानी काठमाडौसँगै जोडिएको जिल्ला ललितपुरको गोदावारी क्षेत्र नामी जुवा अड्डाको रुपमा चिनिन्छ । त्यहाँ हरेक प्रहरी प्रशासनको आँखा पुग्छ । अहिले त्यहाँ डिएसपी फेरिएका छन् । नेतृत्व फेरीएको प्रहरीले ४ लाख ५७ हजार ६ सय ८५ नगद सहित २२ जना भिआईपी जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ ।
ललितपुरको टाहाखेल र सुनाकोठी क्षेत्रमा रहेका जुवा अखडाबाट उनीहरुलाई जुवा खेलिरहेको अबस्थामा महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँका डिएसपी रामकृण सापकोटाको टोलीले २२ जनालाई नगदसहित प्रकाउ गरेको हो । सापकोटा एकहप्ता अगाडि मात्र चापागाउँ वृत्तको नेतृत्व सम्हालेका डिएसपी हुन् ।
बिहीबार बेलुका ललितपुर महानगरपालिकाको सुनाकोठीको ओखट भन्ने स्थानबाट नगद ४७ हजार ९ सय ३० सहित ८ जनालाई पक्राउ गरेको डिएसपी सापकोटाको भनाई छ । त्यसैगरी गोदावरी नगरपालिका वडा नं. १० टाहाखेलमा अजय तामाङले सञ्चालन गरेको मिनिभ्यू कटेज एण्ड बारमा ५ लाख ९ हजार ७ सय ५५ नगद सहित १४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
सुनाकोठी ओखटबाट पक्राउ पर्नेहरुमा अदिप राई, अशोक राई, दीपेन्द्र राई, मान बहादुर श्रेष्ठ, अनुप नगरकोटी, जीवन लामा, रेन्जी शेर्पा र दीप तामाङ रहेको छन् । त्यस्तैगरी गोदावरी नगरपालिका वडा नं. १० टाहाखेलबाट पक्राउ पर्नेहरुमा कृष्णचन्द्र देशार, सन्चलाल पाख्रिन, सन्तोष बजगाई, राजु तामाङ, विजय तामाङ, नारायण भोम्जन तामाङ, झलक तामाङ, विषे तामाङ, कान्छा तामाङ, रवि महर्जन, कुमार भोम्जन, हेम बहादुर तामाङ, अजय तामाङ र आशा तामाङ रहेका छन् ।
कहाँ गयो मानवता ? बैतडीमा मान्छेमाथि डोजर आक्रमण, आठ गम्भीर घाइते
काठमाडौं । अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो भाइरल भएको छ । भिडियोमा मान्छेहरुमाथि नै डोजर
दुई गाउँपालिकाको सीमा विवाद सुल्झाउन गरियो यस्ता ७ बुँदे सम्झौता
काठमाडौ. । बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको बारपाक र धार्चे गाउँपालिकाको लाप्राकबीच लामो समयदेखिको सीमा विवाद सुल्झाउन
सिस्नोबाट यसरी मालामाल बन्दैछन् मेलम्चीका स्थानीय महिला
काठमाडौं । इन्द्रावती गाउँपालिका–२ कुञ्चोकमा उत्पादित सिस्नुको पाउडर बजारीकरण गर्ने अभियानमा महिला सक्रिय बनेका छन्
प्रहरी चौकी बनाउन निःशुल्क जग्गा प्रदान
काठमाडौं । पर्वतमा लामो समयदेखि भाडाको घरमा बस्दै आएको प्रहरी चौकीको आफ्नै भवन निर्माणका लागि
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि नयाँ विषय पढाउने
त्रिविको परीक्षा फाराम भर्ने समय थप गरिएकोबारे अत्यन्त जरुरी जानकारी
त्रिविले भर्खरै गर्यो नतिजा प्रकाशन [अनलाइन यसरी हेर्नुहोस्]
त्रिविले स्नातक तहका विद्यार्थीहरुका लागि जारी यस्तो जानकारी [सुचनासहित]
अंग्रेजी बोल्न गाह्रो हुन्छ भने यस्तो गर्नुहोस्
नेपालकै यो जिल्लामा विवाह गर्नलाई केटा छैनन, केटीहरुको जवानी भरिएर त्यसै पोखिन्छ
ललितपुर बीच सडकमा देखियो यस्तो डरलाग्दो दृश्य
लोकसेवा आयोगले इतिहासमैं पहिलोपटक यति धेरै संख्यामा खोल्यो विज्ञापन [विज्ञापनसहित]
एक समयमको उदाहारणिय जोडि यसकारण संकटमा पर्न थाल्यो